न्याय मरेको देशमा सुन्दरी प्रतियोगिताको चर्चा - Everest Dainik - News from Nepal
न्याय मरेको देशमा सुन्दरी प्रतियोगिताको चर्चा
नेपाल भन्दा सुबिधा सम्पन्न र समृद्ध भएर नै हामी केही कमाउन बिदेशिएको हो। स्वभावैले बिदेशमा इमेल ईन्टरनेट आदिको सुविधा ज्यादा छ र प्रयोगकर्ताहरु पनि। सामाजिक संजालले हामिलाइ एक अर्कामा नजिक राख्न धेरै मद्धत गरेको सत्यता नकार्न सकिन्न। यी माध्यम हरु आफ्ना भावनाहरु साट्ने सजिलो बाटो अवश्य बनेका छन। भावना ब्याक्तिगत होस या समाज परिवर्तनका, भावना देशद्रोही हो या देशभक्तिका, भावना खबरदारीका हुन या खुशियालीका सहजै ब्याक्तिगत हुँदै सार्वजनिक र सबैको प्रतिनिधित्व गराउदै एउटा माहोल खडा गराउने सहज बातावरण हाल बनेको छ।
उदाहरणको लागि लगभग एक बर्ष अगाडिको राजदुत नियुक्तिको कुरा लिऔ, युएइ र ओमानको लागि कुनै नाम सिफारिस भए, अत्याधिक बिरोध पछि युएइको लागि सिफारिस नाम नै परिवर्तन भयो तर ओमानको यथावत रह्यो, त्यस्मा समाजिक संजालको आवाज चर्को थियो, धेरै चर्को युएइको भएर होला यताको सुनुवाइ भएको। खैर कारण के थिए, राजनितिक मुद्दा के थिए त्यता नजाऔ ।
यो एक उदाहरण हो बिदेशी भुमिमा पनि नेपाली सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको आवाजको शक्ति। राम्रा नराम्रा धेरै कुराहरुमा यस्तो आवाज शब्द मार्फत संजालमा छाएका छन र बिकराल रुप लिएको पनि छ। तात्कालिन प्रम पुष्पकमल दाहालको युएइ भ्रमणको एक स्क्रिन शट सामाजिक संजालमा viral बनाउने, नेताहरुका तस्विर इडिट गरेर बदनामी गर्न तत्पर हुने, लगायत #backoffindia , #निर्मलालाइ न्याय जस्ता अभियान हरु।
सामाजिक संजाललाइ कसरि प्रयोग गर्ने नितान्त ती ब्याक्तिगत इच्छा हुन तर यदि सकारात्मक परिवर्तनको लागि प्रयोग गर्न सके सुनमा सुगन्ध झै भने हुने थियो। अभियानकै कुरा गर्दा अहिके बिजयी भव: अभियान चर्को छ, एक नेपाली चेलिको विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागिताको बिषयलाइ लिएर। मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडालाइ बिश्व सुन्दरी बनाउन हामी कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ , हुदा हुदा देशको नेताहरु पनि यश अभियानमा समावेस भएको देखिदै छ।
याे पनि पढ्नुस आइजिपी खनाल प्रकरण: पत्रकारले बनाए भ्रामक कहानी !
म यो प्रतियोगिताको बिरोधी हैन न त म शृङ्खलाको सट्टा अरु कसैले जितोस भनी कामना गर्छु। तर कता कता यो अभियान राष्ट्रवादको नाममा एक ब्यर्थ मेहनत त हैन जस्तो भन्ने लागेको छ। यो अभियानको साटोमा हामिले ल्याउन सक्ने र ल्याउनु पर्ने धेरै अभियान छन जस्लाइ आवश्यकता तराजुमा राखेर तौलने हो भने, हालको अभियान निकै हलुँगो अवश्य हुन्छ।
फेसबुकको यत्रो तामझाम हामि यस्तै शो हरुकोलागी मात्र थाती राख्छौ। पैसा खर्च गर्न आतुर हुन्छौ एस एम एसको लागि। कुनै पनि साङ्गितिक वा अन्य कुनै रियालिटी शो मा आफ्नो मान्छे जिताउन हामी हात धोएर लागि पर्छौ, होला यो मानविय गुण , तर कतै यस्ले समग्र प्रतियोगिताको नै बेइज्जत त गर्दै छैन, सिधा हेर्दा एकात्मक पुजिवादलाइ बढोत्तरी त गरिरहेको छैन? मेरो मनमा उठेको अर्को प्रश्न, के देशले साच्चै जित्छ त?
म चाहान्छु शृङ्खलाले जितुन तर सौन्दर्यको परिभाषा हाम्रो भोटले दिने हो भने कस्तो सौन्दर्यको बखान गर्दै छौ हामिले। यस्तो पनि तर्क सुन्छौ की यो देशको गरिमा हो र देशको सच्चा प्रतिनिधित्व हुन्छ। ती तर्क गर्ने साथिहरुलाइ म अनुरोध गर्न चाहान्छु कि आफ्नै मनमा यो प्रश्न गरि उत्तर दिनुहोला।
हामि यो अभियानमा संलग्न कति जनालाइ हेक्का छ कि मानुषी चिल्लर,स्टेफनी डेल, मेरिया लेलागुना, रोलेन स्ट्र्स आदि कुन देशका नागरिक हुन।
यी पछिल्ला चार प्रतियोगिताका बिजेता हरु हुन। मलाइ त थाहा थिएन मैले गूगल मा खोज गरि यो नामहरु हालेको हो।भनाइको तात्पर्य के देश यहि कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्छ त र प्रतिनिधित्व हुन्छ त? नहुनु भन्दा कानो मामा हुनु बेश, अन्य केही माध्यम बाट नचिनिए पनि यसो केही लाख बिदेशिले नेपाल नाम सुन्लान यो माध्यम बाट तर “मुखमा मोहि छैन पिधमा घ्यु” भनेजस्तो भएन र यो?
हामिले आफू समृद्ध हुन, हाम्रो संस्कार आकर्षक बनाउन, समाज अग्रगामि बनाउन, देश सुन्दर र लोभलाग्दो बनाउन सकेका छैनौ, हुदा हुदा शान्ती सुब्यवस्थाको धज्जी उडिरहेको छ त्यस्लाइ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैनौ अनि लागि परेको छौ देशलाइ चिनाउन। यसरी प्रतिनिधित्व गराइरहदा कुन नेपाल देखाउन खोजेको हामिले? मेरो भनाइ के भने, यी प्रतियोगिता भन्दा भड्किरहेका ती आत्मा, रोइरहेका ती नयन, खान नपाएका लाउन नपाएका ती शरीर, खान नपाएका ती मुख, शब्द हराएका ती आवाजहरुको लागि अभियान चलाउन उपयुक्त होला।
हर दिन दुइगुना रात चौगुना चेली बलात्कारको शिकार भएर पनि न्याय नपाइरहेको देशमा न्यायको अभियानको साटो हामि अब सुन्दरी प्रतियोगिता हाम्रो गर्व भन्दै अभियान लिएर हिडेका छौ।
एक कदम रोकिएर नेपाल फर्केर हेरि मनन गरौ त।
बिश्व सुन्दरी प्रतियोगिता मात्र हैन, देशमा चलिरहेका idol voice आदि जस्ता प्रतियोगितामा भोट गर्ने र त्यस्कालागि अभियान चलाउनेको ताती देखेर म अचम्मित हुन्छु, तपाइहामिले त्यहा गरेको मेहनत के साच्चिकै देशको लागि नै हो त? त्यो रकम जुन एस एम एस आदिमा खर्च भयो कस्ले लाभ लिएको छ त? यी एक केन्द्रीकृत पुजिवादको लाभको लागि बिकेन्द्रीत गरिएका हागाहरु मात्र हुन। हामिले कुन कुरालाइ प्रमुख मान्ने र अत्यावश्यक ठान्ने सोच्न सकिरहेको छैनौ जस्तो मैले बुझेको छु।
हुदा हुदा देशका नेता जस्लाइ समृद्ध नेपाल बनाउनुहोस भनेर हामिले पठाएका छौ, वहाहरु समृद्धि अहिले सुन्दरी प्रतियोगितामा देख्न थाल्दै हुनुहुन्छ, हो एक नेपाली चेलिले जितुन तर यदि भोट नै त्यस्को आधार बनाएर अभियानमा जाने हो र अन्य देश पनि हामी झै लागेमा हामी त टप दस हैन, पहिलो चरण पनि पार गर्दैनौ। रसिया, भारत, चाइना आदि जस्ता देशको तुलनामा न त हामी ईन्टरनेटमा(टेक्नोलोजी) अघि छौ न जनसंख्यामा त्यही पनि किन हाम्रो शृङ्खला आज धेरै जनसंख्या भएको देश भन्दा पनि अगाडि छिन।
किनकी हामिलाइ हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुराको ज्ञान छैन तर ती देश हरुलाइ छ। त्यसैले उनिहरु समृद्ध छन र हामिहरु कुना कन्दरामा हराइ रहेका छौ।
सुविधा सम्पन्न हामी अभियान्ता हरुलाइ कति ज्ञान छ तुइन पनि नभएर कति चेली पढ्न स्कुल जान पाउदैनन, आर्थिक स्तर अती न्यून भएर कति चेलिहरु खाना खान पाउदैनन, पढ्ने खर्च जोहो नभएर कति चेलिहरु अरुको रछ्यानमा पुगेका छन, बोल्ने आवाज दबिएर कति लुटिएका चेलिहरुले घाटिमा शल र डोरि बाधि रुखका हागा र घरका तक्तामा झुण्डिएका छन, न्यायहराएको अवस्थामा रहेका कति परिवार बिचल्लिमा छन। के हामिलाइ यश बिषयमा ज्ञान् वा हेक्का छैन त? यदि छ भने ती एक चेलिको लागि हामिले खर्चेको समय श्रोत र साधनको आधा मात्र यी बिषयमा खर्च गरौ त, अनि हेरौ नतिजा।
विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा बनाइएको भिडियोले पर्यटकमा बढोत्तरी हुन्छ भन्ने मेरा मित्र हरु, त्यहा देखाइएकी नेपालले के यथार्थमा हामिले देखेको र भोगेको नेपाललाइ प्रतिनिधित्व गर्छ त? बास्तविकताको नेपाल त्यही नै हो त? हामिले एक ब्याक्तिको जिवनलाइ प्राथमिकता राखेर आधुनिकीकरणलाई अपनाएको झै गरेर नाटक रच्दै गर्दा बास्तवमा हामी अझ धेरै पछि धकेलिदै छौ? हामिले हामी सग उपलब्ध श्रोत र साधनलाइ पहिले समाज बनाउन खर्च गरौ अनि लागौला यस्ता बिलाशिता तर्फ।
समृद्धि सुन्दरी प्रतियोगिता, बिदेशी गायन र नृत्य प्रतियोगिताबाट आउदैन, पहिला देश भित्रका गन्दगी सफा गरौ। अन्त्यमा शृङ्खला बहिनिलाइ हार्दिक शुभकामना र उनले जित्न सकुन। बिजयी भव:
ट्याग्स: निश्चल दाहाल